Home News Safar Badanaa: Farmajo oo si Hal haleel ah Jibuuti iyo Turkiga ugu...
Safar Badanaa: Farmajo oo si Hal haleel ah Jibuuti iyo Turkiga ugu socda.
Waxaa dalka walaalaha ee Jabuuti ku sugnaa muddo ka badan shan maalmood Wasiirka Boostada JFS Cabdi Canshuur iyo Wasiir K/X Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa aya ugu danbeynta waxa ay galabta la kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Wadahadalka labada wasiir iyo Madaxweyne Ismaaciil aya aha mid aad u kulul wuxuuna Madaxweyne Ismaaciil u sheegay labada masuul in dowladda Soomaaliya oo aan walaalaha nahay ay dhabarka middi naga geliyeen mana ahayn wax aanu ka fileynay ayuu yiri Madaxweyne Ismaaciil.
Wadahadalka aya qaatay wax ka yar soddon daqiiqo waxaana ugu danbeyntii uu ogolaaday Madaxweynaha Jabuuti in uu la kulmo Madaxweyne Farmaajo, waxaana ay sheegeen wasiirada uu dirsaday madaxweynaha in uu berrito oo Khamiis ah uu dalka Jabuuti tegi doono Madaxweyne Farmaajo halkaaso uu uga sii gudbi doono magaalada Ankara.
Dowladda Jabuuti iyo Soomaaliya aya xiriirkooda xumaaday kaddib markii uu Madaxweyne Farmaajo si lama filaan ah uga degay magaalada Asmara, kana codsaday caalamka in Eriteriya laga qaado cuna qabateynta, waana midda keentay in walaalaha Jabuuti ay aad uga caroodeen hadadalada ka soo yeeray dowladda Soomaaliya.
Wasiirkii A/Dibadda ee Erteria oo Xamar yimid waxaa uu ku adkeystay inaan waxba laga badaleyn wixii lagu soo heshiiyey. Qoddobada la isku mari waayey: in Eretria madaxweynaheedu uu sheego inta uu Xamar joogo inuu sii deynayo maxaabiista Jibuti Iyo Inuu Ogolaaday in laga wadahadlo dhulka ay Eretria ka haysato Jibuuti.
Hasa yeshee Eretria oo waxay rabtay ka gaartay Farmajo waxay u sheegtay inaysan waxaas iwm aysan ogoleyn isla markaana aysan kala jecleyn in Farmajo marada loo celiyo iyo in kale waqtigaan. Waana sabata uu hadda Farmajo u aaday inuu iska baryo Ismaciil Cumar Geele.
Eritereeya ayaa waxaa dhul iyo maxaabiis ay ka haysataa dowladda Jabuuti, waxaana isku day lagu dhexdhexaadinayay labada dhinac uu fashilmay dhowr goor oo ay isku dayday dalka Qatar in aay soo afjarto colaada ka dhexeeysa Jabuuti iyo Eritereeya.
Sida ay sheegayaan saadaalilyayaasha siyaasadda Farmaajo kalama soo kulmi doono natiijo soo celisa kalsoonida Jabuuti, waayo lagama yaabo in uu baal maro heshiisyadii uu la galay Eritereeya iyo Imaaraadka.
Maxaa soo korodhay oo Eretria ku saabsan
Previous articleSaraakiil Ciidan Oo Shaqada Laga Joojiyay
Next articleMadaxda Dowladda Oo Ciidamado Gurmad Ah U Diraya Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/dhexe